Movies Ncell जिन्दावाद!धरम के.सी. १९९२-९३ को कुरा हो, साउदी अरबको अल सुलइलमा काम गर्दा बिहान मिर्मिरेमा एउटा थैलो भरी १-१ रियालका सिक्काहरू बोकेर टेलिफोन मशिनमा गई नेपालमा परिवारसंग कुरा गरेको अझै सम्झना छ । १ मिनटमै १० वटा सिक्काहरू झर्थे मशिनमा त्यतिबेला । अहिले (१७ बर्ष पछि) मात्र १ मिनट कुरा हुने त्यही १० रियालको कार्डबाट नेपालमा १७ मिनट कुरा गर्न पाइन्छ । तर साउदी अरबका मोबाइल कम्पनीहरूले भने अहिले पनि नेपालमा हुने कलमा प्रति मिनट ४ रियाल चार्ज गर्दैछन । यद्यपि यदा कदा बिशेष छुटका प्याकेज दिदै कार्डकै रेटको हाराहारीमा पनि आउने गरेका छन ।
नेपालमा हुने फोन कलको दरमा बिगतको तुलनामा ठुलो गिरावट आएता पनि नेपाली कामदारहरूको फोनमा हुने खर्चमा कमी आएको छैन । यसको कारण नेपालमै पनि फोनको ठुलो बिकास र बिस्तार भई फोनमा अधिकांश नेपालीहरूको पहुंच पुग्नु पनि हो । हिंजोका दिनमा महीनामा एकचोटी फोन गर्नेहरू अहिले हप्तामा एक चोटी गर्छन, हप्तामा गर्नेहरू अहिले दैनिकजसो गर्दछन । तर पनि सुझबुझका साथ किफायत र मितब्ययितापुर्बक फोन गर्नेहरूले अब त्यति ठुलो खर्चिनुपर्ने अवस्था छैन ।
साउदी अरबका महामहीम राजदुत श्री हमिद अन्सारीज्युले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको १ महीनामै दमाममा प्रबासी नेपाली सेवा समितिको महाधिवेशनको अवसरमा दिनुभएको मन्तब्यमा आफ्ना प्राथमिकतामा ४ वटा ‘T’ को कुरा गर्नुभएको थियो जसमध्ये एउटा ‘T’ टेलिफोनको लागि थियो । टेलिफोनको महसुल दर तथा नेपाली कामदारहरूले ब्यहोर्नुपरेको फोन खर्चको ब्ययभारको गम्भीरता झल्किन्थ्यो त्यतिखेर । २९ अगस्त २००९ मा पारित एनआरएनएको दुबई घोषणापत्रमा पनि समावेश छ मध्यपुर्बमा फोन सुविधाको बिषय । साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन र लेबनानका एनसिसी अध्यक्षहरूले तयार पारेको उक्त घोषणापत्रको मस्यौदा जब अन्तिम स्वीकृतिका लागि तत्कालिन आइसिसी अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोज्युको मा पुर्याइयो तब वहांले उक्त फोनको बुंदामा भन्नुभएको थियो “तपाईहरूले स्वीकृति मात्र दिलाउन सक्नुभयो भने म १ महीनामै फोन सुविधा ल्याइदिन्छु र महसुल घटाइदिन्छु” । वहांले मध्यपुर्बमा बिदेशी मोबाइल कम्पनीहरूले त्यति सजिलै स्वीकृति पाउन सक्दैनन भन्ने शायद पहिल्यै बुझिसक्नुभएको थियो । तर पनि वहांले त्यो बुंदा काट्नु भएन र यथावत रहनदिनुभयो । उक्त घोषणापत्र जारी भएको अहिले १ बर्ष बित्दा नबित्दै नेपालमा ‘मेरो मोबाइल’को नाम परिवर्तन भई ‘एनसेल’ भएको छ र संगसंगै यसको ब्यापक बिकास र बिस्तार पनि । हाम्रा लागि सर्बाधिक खुशीको कुरा यो छ कि अहिले एनसेलबाट साउदी अरब लगायत ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेका मुलुकहरू मलेसिया र दक्षिण कोरियामा समेत मात्र ६ रूपैया प्रति मिनटमा फोन वार्ता हुनसक्दछ । जबकि साउदी अरबमा हामीहरू अहिले पनि स्थानिय कलमा समेत ७० हलाला (करीब १४ रूपैया) प्रति मिनट तिर्दैछौं । यसरी यहांका स्थानिय साथीभाइहरूसंग १ मिनट कुरा गर्ने खर्चमा हामी अब नेपालमा आफ्ना परिवार र आफन्तहरूसंग २ मिनट कुरा गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं एनसेलका कारण । यसैले भन्न मन लाग्छ “एनसेल जिन्दावाद” । सबैलाई थाहा छ एनसेलमा उनै डा. उपेन्द्र महतोको शेयर छ । अहिले हामी बुझ्दैछौं डा. महतोले मध्यपुर्बमा हामीले फोनको महसुल घटाउन यहां केही गर्न सक्दैनौं भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यो बुंदालाई किन यथावत रहनदिनुभएको रहेछ त भनेर । हो, हामीले अब एउटा काम अवश्य गर्न सक्छौं – नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार र आफन्तजनहरू सबैलाई एनसेलको प्रयोग गर्न लगाउन सक्छौं र एनसेलबाटै यहां हामीलाई कुरा गर्न लगाउन सक्छौं । आखिर पैसा जोगाउनु नै पैसा कमाउनु पनि त हो । किन नेपालको NTC लाई प्रति मिनट रू.२० तिर्ने, किन साउदी अरबको STC या Mobily या ZAIN लाई प्रति मिनट सा.रि. ४ (रू.८०) तिर्ने ? जबकि एनसेलमा मात्र रू. ६ प्रति मिनटमा कुरा गर्न पाइन्छ । साउदी अरब र मलेशियामा जस्तो अति कम तलबमा काम गर्न बाद्य लाखौं नेपालीहरूप्रति एनसेलले देखाएको यो स्नेह र सहानुभुतिका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न मन छ र संगसंगै डा. महतो प्रति एउटा गुनासो पनि । त्यो के भने एनसेल जस्ता कम्पनीहरूमा एनआरएनहरूलाई सामुहिक लगानीका लागि आह्वान गरिएको भए एनआरएनहरू कति खुशी र गर्बित हुनेथिए होला ? जुन वहांको आफ्नो बचन बध्दता पनि थियो । तर अहिले सम्म वहांबाट त्यस्तो हुन सकेको छैन र आसा मरिसकेको पनि छैन । अस्तु.Posted on : July 27, 2010, 5:19 amSource :